Tulsi Ghimire Biography | Hamro Kalakar
Facts of Tulsi Ghimire
Actor, Director, Editor, Song Writer
दक्षिणा, दर्पण छायाँ
मौलिक नेपाली गीत
Contact Tulsi Ghimire
Suggestion for Tulsi Ghimire
Tulsi Ghimire is Actor, Director, Editor, Song Writer. He was born on 15th July in Kalimpong, Darjeeling. His horoscope is Cancer. His marital status is Single. His favorite movie is दक्षिणा, दर्पण छायाँ, favorite music is मौलिक नेपाली गीत, favorite place is नेपाल, दार्जिलिङ.
नेपाली रजतपटको एउटा मुर्धन्य व्यक्तित्वको नाम हो, तुलसी घिमिरे । त्यस्ता हात सायद नेपालमा छैनन्, जुन उनलाई सलाम गर्न उठ्न नसकुन् ।
भारतमा थुप्रै चलचित्रमा अस्टिेन्ट गरेका उनी पहिलो पटक भक्त भानुक्त नामक डकुमेन्ट्रि बनाउन वीरगन्ज हुँदै नेपाल छिरेका थिए । आफ्ना गुरु गुल्जारले आफ्नो भाषामा कम्तिमा १० वटा चलचित्र बनाउन दिएको आज्ञा सिरोपर गर्दै नेपाल छिरेका घिमिरे ‘गुरु दक्षिणा’ समेत गरेर १० वटा चलचित्र बनाएर भारत फर्किन तरखरमा थिए । तर, त्यही बेला प्रकाश थापाले उनलाई नेपाल छोडेर नजाउ भने । उनले पनि हार्न सकेनन् यहीँ बसे । तिनै घिमिरे हुन् जो नेपाली चलचित्रको श्रीबृद्धिमा आज पर्यतन्त लागिरहेका छन् ।
उनी नेपाल आउँदा दुई वर्षमा एउटा चलचित्र बन्थ्यो । आज वर्षको डेढ सयको हाराहारीमा चलचित्र बन्ने थाले ।
त्यस्ता दिन पनि थिए, त्यो समय उनका सामु नेपाली चलचित्रकर्मी तथा कलाकारहरु उनलाई ठाडो शिर गरेर हेर्न पनि धक मान्थे ।
उनले निर्देशन गर्दा ती सुरुआतका वर्षमा नेपालमा सेलुलाइड प्रविधिमा चलचित्र बन्थे । उनी भन्छन्, अहिलेको पुस्ताले त्यो प्रविधिको कल्पना पनि गर्न सक्तैन जुन प्रविधिमा हामीले दशकौं चलचित्र बनायौं । र, हामीले अपेक्षा पनि गरेका थिएनौं जुन प्रविधि अहिले आयो ।
चलचित्र पेशा थिएन
तुलसी घिमिरेको समयमा चलचित्र उद्योगलाई उद्योग ठानिदैन थियो । चलचित्रलाई मनोरञ्जनको माध्यम ठानिन्थ्यो । बजार सानो थियो । फाइदा कमै हुन्थ्यो । निर्देशन पेशा आफैमा चुनौतीपूर्ण थियो । शोखीनले मात्रै यसलाई पेशाका रुपमा लिन्थे । परिवार चलाउन निकै गाह्रो थियो । त्यो समय प्रकाश थापा, यादब खरेल लगायतका निर्देशक थिए ।
त्यो बेला सम्म पनि नेपाली चलचित्र बचपनामै थियो । त्यसपछि तलुसी घिमिरे आए । चहपहल केही बढ्न थाल्यो । त्यसपछि सम्भू शाह, निर शाह, चेतन कार्की, लक्ष्मीनाथ शर्माहरु आए । चलचित्र बाक्लै रुपमा बन्न थाले ।
कहिले सफल कहिले असफल
बीचका केही वर्ष निर्देशक घिमिरे केही ओझेल परेजस्तो देखियो । उनीका केही चलचित्र आशातित सफल हुन सकेनन् । ‘मृगतृष्णा’, ‘दृष्टिकोण’, ‘देश’, ‘दर्पाण छायाँ–२’ लागायतका चलचित्र कम रुचाइए । उनी भन्छन्, सायद मैले कही नयाँ पुस्ताका लागि भनेर गर्दा उहाँहरुको टेस्ट बुझ्न सकिन होला त्यही भएर पनि म ओझेलमा परे जस्तो देखियो होला ।
तर, दर्शकले मबाट नयाँ होइन मेरै ब्रान्डको गम्भीर प्रकृतिको चलचित्र खोज्नु हुँदोरहेछ । हिट हुनलाई, चर्चामा आउनालाई चलचित्र हिट हुनुपर्छ । त्यो मात्रै नभएको हो । म हराएको छैन । यही कर्मभूमी नेपाल र चलचित्रमै छु ।
हामीले हाम्रै मौलिक चलचित्र बनाउनुपर्छ । अनि मात्रै हाम्रा चलचित्र मन पराइन्छ । हामी दशकौं देखि हिन्दी चलचित्रको नक्कल गरिरहेका छौं, त्यही भएर हो हामी पछि परेको ।
हाम्रो साहित्य अनुसारको चलचित्र बनायौं भने हाम्रो चलचित्र उद्योग माथी उठ्छ । हाम्रो साहित्य विश्वमा राम्रो छ ।
सुरुमा हामी निकै थोरै थियौं । सानो थियो चलचित्रको बजार । चलचित्रकर्मी थोरै थिए । एकअर्कालाई सबैले चिन्थे । सबै सबैका कार्यक्रममा भेला हुन्थे । रमाइलो हुन्थ्यो । तर, अहिले अवस्था फरक छ । त्यो बेला युवा दर्शक कम थिए । अहिले युवा दर्शक धेरै छन् । चलचित्र नगरी ठूलो हुँदै गयो ।
नयाँ नयाँ बाही बहिनीहरु आए । निकै राम्रा राम्रा निर्देशक तथा कलाकार भाइबहिनीहरु आएका छन् । उनीहरुले आफूलाई अपडेट गराइरहेका छन् । तर, हामी अपडेट हुन सकिरहेका छैनौं ।
हाम्रा चलचित्र पनि राम्रा बनेका छन् । बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै समस्या बनेको छ । मौलिक विषयमा बनेका चलचित्र मन पराइएका छन् । लुट, पशुपतिप्रसाद निकै राम्रा प्रयोगात्मक चलचित्र हुन् । यि चलचित्रलाई सब टाइटल राखेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउ हो भने सबैतिर मन पराइन्छ ।
समस्या हामी मै छ । हामी आफ्नै कथा छान्न सकिरहेका छैनौं । मौलिक लोक गीत छान्न कन्जुस्याँई गरिरहेका छौं । स्लो स्टोरी टेलिंङ छ । बजेट पर्याप्छ छैन । सरकारले गर्न सक्ने सहयोग पनि गर्न सकेको छैन ।
विश्व बजारका लागि पहल गरिदिएको छैन । चलचित्रकर्मी आफ्नै पहल र पहुँचका भरमा मात्रै विदेशी बजारमा पुगिरहेका छन् । समस्याको कारण हामी आफै भएर हो हाम्रो बजार नबढेको ।
बक्स अफि लागु भएको छैन । निर्माता मारमा छन् । वितरक र हलले फाइदा लिइरहेका छन् । हिसाव पारदर्शी छैन । हामीमा राष्ट्रियता छ । हामी हाम्रा चलचित्र थोरै राम्रा छन भने पनि मायाँले हेर्छौं । त्यसैले राम्रा चलचित्र बनायौं भने हाम्रो भविश्य सुरक्षित छ ।
१०१ दिन मनाउने ती चलचित्र
घिमिरे तिनै निर्देशक हुन जसका चलचित्र हेर्न दर्शकले प्रहरीको लाठी खानु पथ्र्यो । घिमिरे तिनै कलाकार हुन्, जसका चलचित्र हेर्न दर्शकले महिनौं कुर्नु पथ्र्यो । तिनै घिमिरे हुन्, जसका चलचित्र एक सय एक दिन सिनेमा हलमा व्यापार गर्थे । र, तिनै घिमिरे हुन् जो नेपाली चलचित्र उद्योग आर्थिक रुपमा जरजर बनेका बेला समकालीन सबैले चलचित्र उद्योगलाई पिठ्यु फर्काएर हिँड्दा एक्लै काँध हालेर बसे ।
Tulsi Ghimire Photo Gallery
Tulsi Ghimire Videos